Ichi chinyorwa chinounganidza zvese zvatinoona pamusoro pe 17-inch Asus TUF FX705 pakati pezera remitambo yekutamba.
Takapedza vhiki mashomanana nekwakagadzirwa kwepamusoro-fikisi yeFX705 GM (i7-8750H processor, GTX 1060 graphics, double-storage) uye tinoziva kuziva kwayo yakasimba uye quirks.
Iyi laptop ine maekisi mashoma pasi payo sleeve: yakasimba yakagadzirwa, iyo yakagadzirwa uye yakachena chiedza fomu (nokuda kwe17-incher), kushanda, iyo 144 Hz IPS kuratidza uye yekupedzisira asi kwete, iyo inotyisa mutengo. Hazvive zvisina kukanganisa kana kupikisa kwakasimba kunyange zvakadaro, asi zvakadaro ndeimwe yezvinhu zviri nani zvinowanikwa mukirasi yake uye ndingatarisira vazhinji venyu kuti muve mune vheori yenyu mumwedzi inotevera.
Verenga pamusoro kuti uwane kuti Asus TUF FX705 GM inopfuura ipi, inobva pane imwe nzvimbo yekuvandudza uye kuti inotarisana sei nedzimwe nzira dziri kunze uko.
Screen 17.3 inch, 1920 x 1080 px, 144 Hz, IPS, kusabata, matte
ndangariro 16 GB DDR4 (2x DIMM)
chengetedzo 256 GB SSD (M.2 PCIe) + 1 TB 5400 rpm HDD (2.5 ")
Kubatana Gigabit LAN, Wireless AC (Intel AC 9560), Bluetooth 5.0
bhatiri 64 Wh, 180 W goroja
zera 400 mm kana 15.74 "(w) x 280 mm kana 11.02" (d) x 27.6 mm kana 1.08 "(h)
uremu 5.75 lbs (2.6 kg) + 1.1 lbs (.5 kg) yejaja
Extras AURA 4-zone RGB yakadzorera keyboard, webcam, DTS headphone yakabuda
IAusus TUF FX705 ikombiyuta yakanaka, yakajeka uye yakavakwa.
Inotora zvishoma 7.2 mm bezels pese pevharo, asi mhedziso refu ye 14 mm iyo inogadzirisa kamera nemakrofoni, pamwe chete nechigamba chikuru chinoputira skrini kumusoro. Iyo pfupi, pa 5.8 lbs (2.6 kg), yakajeka kudarika mamwe akawanda 17-inchers uye zvishoma zvishoma kudarika kupfuura yakawanda pakati pezera 15-inch laptops.
Iyo yakaderedzwa kukura uye kuyerwa, yakabatanidzwa nesimbi yakasimba, inoita kuti FX705 ipfeve yakakwana kune avo vese vanove vachikomberedza pasi pe laptop yako mumusana wako. ITUF nhepfenyuro inosanganisirawo MIL-STD-810 yakavimbiswa, iyo inoreva kuti "inopupurirwa kuti ichengetedze dambudziko zuva nezuva" maererano naAsus. Vose maptops vanofanira kuita izvo izvo, asi hey, izvi zvinofanira kuva zvakasimba uye zvakavimbika kudarika boka rakaenzana.
Chivharo chacho chinogadzirwa kubva pachiganda chesimbi uye chakasimba kwazvo kudarika mamwe maAusto laptops, uye anenge asingadi kupa noma kuchinja. Zvose zvekuvakwa zvachose zvakagadzirwa nemapurasitiki, asi ndiyo inonyanya kumira zvakanaka, uye apo paine zvimwe zvinoshandiswa mukati mechikwata chebhokisi, iyi laptop inonzwa yakazara yakasimba uye yakanyatsogadzirwa. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinotenderera zvakashata asi, sepurasitiki yakagadzirwa nepasi pemahwindo.
Iyi nhepfenyuro inotarisawo tsvina kune dzimwe mimwe mitambo yeAusus yemitambo. The FX705 inowanikwa muGold Steel kana Red Matter miraimu, uye tine yekare, iyo inowanzoita rima-grey, ine nyanzvi yegoridhe ASUS backlit logo pane hood. Yakarongedzwa nekamuri, saka haigoni kuvharwa, asi zvishoma hapana kune mamwe magetsi uye obnoxious design elements kuti atarise. The Red Matter version inowana chikamu chitsvuku chekatsvuku uye dzimwe dzvuku-accents dzakakomberedza chifukidzo uye pazororo-zororo, saka hazvina kuchena seiyo.
Sezvaunoshandisa pakufamba, FX705 inogara zvakanaka padhesiki, nekuda kwehuwandu hwemakumbo erubha iri mudumbu, inowana zororo remichindwe rakakura rine mitsetse yakajeka uye makona akapoteredza, uye mabheji maviri akasimba anochengetedza chinyorwa panzvimbo se- up. Vanobvumira kuzarura chiratidziro neruoko rumwe uye vodzokera kumashure kusvika kuC145 madigiri, zvakakwana kuti daisi ishandiswe.
Ndinofanirwa kutaura nezvemamiriro ezvinhu asina kufanira akaiswa ma LED, pasi pechigadziko, uye chokwadi chokuti bhodhi resimba rinogara ruchivhenekera, izvo zvinogona kugumbura kana uchiona firimu mune imwe nzvimbo yerima.
Kupisa kunonyanya kukosha pamutambo wekutamba, uye FX705 inogovera zvigadzirwa nediki FX505, inopinda mudumbu, pamusoro pechibhokisi uye kune rumwe rutivi, uye zvabuda pamucheto kumashure. Tichazotaura-zvakadzama pamusoro pehutano hwehutsika uye maitiro ayo achiwedzera pasi.
Chimwe chinhu chokupedzisira chekutaura apa ndiIO, iyo inopa zvidzidzo zvaunoda pane kombiyuta yakadaro (3x USB-A slots, HDMI 2.0, LAN, audio output), asi pasina USB-C uye asina kadhi-muverengi . Pamusoro peizvi, vose vanobatanidza vakabatanidzwa kuruboshwe, iyo inhau dzakanaka kune vashandi vakarurama, asi panguva imwechete vangauraya izvi zvakasara.
Zvose pane zvose, Asus akaita zvakanaka neTUF FX705. Iyo makombiyuta akavakwa zvakanaka ane maitiro akajeka uye akajeka, zvishoma kugadzira fluff uye zvishomanana ergonomic zvikanganiso. Izvo zvakadaro asi yakawanda inogadzirwa nepurasitiki, saka haifaniri kunzwa sokutanga seimwe sarudzo dzimwe kunze uko, uye inongowanikwa chete yezvigadzirwa zveports.
Sezvo ndinogona kutaura, Asus anopa FX705 nemaviri keyboard options: a red backlit version uye 4-zone RGB Aura keyboard, yakafanana neyeyo ROG GL704 Scar II mienzaniso. Tine mhedziso pane yedu yedu.
Ndiyo imwechete keyboard inoshandiswa pane zvinyorwa zviduku zveFX505, zvine chimiro chakanaka, asi makakani mashomanana uye chikamu NumPad. Nheyo dzeWASD dzakagadzirwa kubva purasitiki yakachena, iyo inobvumira kujekesa kupenya kuburikidza. RGB 4-zone illumination inoshandiswa nekibhodi iri mhando dzakasiyana, dzinochengetedzwa kuburikidza neTUF AURA software inouya inotanga kuiswa.
Iyi keyboard yakanzwa zvakasiyana pane ye FX505 yatakakurukura imwe nguva yapfuura. Pane zvishoma zvisinganzwisisiki muhombekiti huru pane chikwata ichi, asi zvinoshamisa kuti hazvina kutungamirira kune zvakagadzirisa zvakaitika. Kwandiri, kiyi paFX705 inonzwa sekuti inoda mhepo isinganzwisisiki yakasimba kuti iite, iyo yakabvumirana nehupamhi hwavo 1.8 mm uye kuti ini ndakashandiswa kupfupika uye kutapudza mhinduro, zvakatora zvose zvandaifambisa nekunyora kwandakaita .
Asus anotaura nezvemhando yepamusoro-soro inoshandiswa ne keyboard iyi, iyo inory inofanira kubatsira kubhadhara shamhu kunze kwekusimudzira zvigaro kwose kwose, asi nokuda kwechimwe chikonzero chakanga chisina kushanda sezvinotarisirwa pane chikwata ichi.
Mukupedzisa, kwandiri ini haisi iyo inokurumidza kana yakanyatsogadziriswa keyboard yekuisa pairi, kunyange nemakumi ezviuru emazwi ari muhomwe iyo. Zvisinei, iwe uri kuuya kubva kune imwe yepuraputa kana kubva kubhidhiyo yekodhidhiyo, iwe uchada kufara nayo. Gamers ichakoshesawo zvimwe zvezvinhu zvayo, sezvinovimbiswa kutendeseka (zvakanaka kusvika kumichina mikuru ye 20 miviri) uye n-key rollover.
Chikwangwani chiri kune rumwe rutivi chinoshanda zvakanaka kwazvo. Iyo ipurasitiki yakaenzana yakakura Synaptics pamusoro nevanotengesa Dzakanaka uye iyo inobata zuva rega rega shandura, zviratidzo uye inoshamba zvakanaka uye yakavimbika. Zvinyorwa zvisikwa zvakanaka zvakanaka zvakare, kunyange zvazvo zvishoma pamativi echidiki.
Asus inopa TUF FX705 mitsara pamwe ne 60 Hz kana 144 HZ 17.3-inch IPS panel, zvose zviri zviviri zvinopera. Takawana yekupedzisira pane test model yedu.
Ndiyo firimu rinokurumidza rine nguva yakanaka yekupindura, saka chinhu chakakura chevatambi, kunyanya kana vakawirirana neGTX 1060 mifananidzo iyo inogona kutora zvigadziriswe-mazinga nemazita akawanda. Haina GSync, saka iwe ucharamba uchitsvaira uye zvipfeko mune zvimwe zviitiko, asi izvo zvisinganyanyi kunetseka, kana kutoonekwa, kudarika muyero we 60 Hz.
Nhengo yepaneji kune rumwe rutivi inongova nepamusoro pepakati yevhareji, ine mavara akanaka, mavara-madema uye akasiyana, asi pane kupenya kwepamusoro kwepamusoro uye zvimwe zvinowirirana nyaya. Tsanangudzo pasi apa, inotorwa neSpyder4 sensor:
Nhamba: 97% sRGB, 70% NTSC, 75% AdobeRGB;
Akayera gamma: 2.2;
Mazuva ano Max ari mukati mekona: 263 cd / m2 pane simba;
Kusiyana kwekupenya kukuru: 860: 1
Nhamba yakachena: 6800 K;
Dzvuku pahupamhi hukuru: 0.30 cd / m2.
Iri jira rakanyatsochengetwa kunze kwebhokisi, asi iwe unogona kupa our calibrated profile try kuti awane gwaro rakachena rakagadziriswa uye grey mazinga.
Hakusi kuzoita chero chinhu pamusoro pehutano, asi ndinofunga kuti ihwohwo hunhu hwekugadzirisa unhu nehutumbi hwedu uye iwe unofanirwa kuwana shanduro iri nani pane yako. Iva nechokwadi chokuti uedze kunze uye RMA chibereko kana iwe ukatora tsvimbo shoma.
Tinofanira kuedza pakati pepakati pakatarisana kweTUF Gaming FX705 series, muenzaniso weFX505GM pamwe neatanhatu-core Intel Core i7-8750H proto, 16 GB RAM (2x DIMMs), mbiri yekuchengetedza uye Nvidia GTX 1060 6 GB graphics Chip.
Izvo zvinosanganisira 256 GB PCIe SSD inopa kuverenga nekukurumidza uye inonyoresa inonyora, asi iri kukurumidza kudarika 128 GB version yatinoona pane yakarongedzwa FX505 uye ndinofunga kuti vakawanda vachaiwana yakakwana. Kana zvisingaiti, unogona kugara uchivandudza.
Izvo zvikamu zvinosvika nyore nyore kana iwe ukapfuura napamusoro pepane panze, iyo inogadziriswa panzvimbo neine zviduku zvezvikamu zve Philips. Mukati mauri muchawana mhemberero mbiri uye iyo mbiri yekuchengetedza. Iko CPU neGPU zvinoshandiswa paribhobhobhoyo uye kwete-upgradeable.
Nekuda kwekushanda kunoenderera mberi, iyi laptop inogona kubata nyore zuva rega rega mabasa, iyo inoshanda yakanakira uye yakanyarara. Asus inopa hupfumi huwandu hwepurogiramu: Silent, Balanced and Overboost. Ini ndinorayira kuti kazhinji uchengete laptop yako paInguva yakanaka, sezvo vatungamiri vanoita basa rakanaka pakuchengeta vateveri vakanyarara nekushandiswa kwezuva nezuva uye kungozvitsvaira pamwe chete ne multitasking uye nezvimwe zvinorema zvinotakura. Pasi pasi isu tichataurirana kuti nzira dzakanyarara uye dzeOboboost dzinobatsira sei pakuita mitambo.
Chokutanga, tinoedza maitiro eCUU kuburikidza nekushandisa Cinebench R15 Multi-Core kakawanda muchitsiko uye unyore mafunguro eC CPU, kutonhora uye zvikoro.
Kunze kwebhokisi, i7 mune mienzaniso yedu mienzaniso kusvika kune yakakura ye Turbo Boost Frequencies, asi inosvika nokukurumidza kusvika 95 digrii Celsius uye inogadzirisa pane 2.8 - 3.1 GHz uye kufema kwemaawa anenge ane 70-75 digiri Celsius. Iyi inopesana nehutsinye, hutsinye kune huwandu hweFX505 takaedzwa mavhiki mashomanana akapfuura, uye inoshandura muzvikamu zvepamusoro pepakati pe 1000 - 1050 pikiso mumusana wepakati pemuedzo. Ramba uchifunga nezvemuenzaniso wedu unotangira-kutengesa, uye isu tarisira kuti zvikamu zvekupedzisira zvekutengesa zviitike pedyo neFX505.
Chero nzira, isuwo tisina kukanganiswa CPU an -100 mV (iyi nyaya inotsanangura kuti chii chinonyadzisa uye kuti chingaita sei) uye akadzoka zvakare miedzo. Muchiitiko ichi CPU inobhururuka zvishoma nezvishoma, uye inodzika kumativi akakomberedza 3.2-3.4 GHz mushure mekurova hwapakati mukati me90s chiyero chekupisa, iyo inoshandura munzvimbo dzakawanda dzepakati pe 1080-1130 pikiso mumakwikwi akafanana.
Mune mamwe mazwi, kusazvidzora kunotungamirira kune zvishomanana 3-8% kuwedzera kwekuita kwekutsvaga kweCUU zvinotakura, kunyange mune izvi zvakanyanya kushandiswa kushandiswa, izvo zvinovhiringidza CPU nepamusoro pe 75 degrees Celsius. Kuenzanisa, iyo CPU inotenderera kune 85-90 digrii Celsius mune zvimwe zvinoshandiswa mumamiriro akafanana, izvo zvinoshandura mu-high-frequencies.
Isuwo takamhanyira mararamiro edu emitemo, uye heino izvo zvatiinazvo:
3DMark 13 - Moto Strike: 9793 (Graphics - 10918, Physics - 15699);
PCMark 08: Musha Unokodzera - 3984;
PassMark: Nhamba: 5323, CPU mark: 12057, 3D Graphics Mark: 8608;
x264 HD Benchmark 4.0 32-bit: Pfuura 1 - 195.22 fps, Pfuura 2 - 63.94 fps.
Isuwo takamhanyira vamwe vavo pa -100 mV isingazivikanwi profile:
3DMark 13 - Moto Strike: 9843 (Graphics - 11008, Physics - 15793);
x264 HD Benchmark 4.0 32-bit: Pfuura 1 - 198.16 fps, Pfuura 2 - 69.61 fps.
Kungofanana nekucherechedza muCinebench kuedza, kusazvidzora kunoshandura mukuvandudzika kuduku mune izvo zviedzo zvinowedzera mutero wekukwereta pamakumbo ose e6 yeI7-8750H CPU.
Asus angabvumira CPU kukurudzira pamusoro pekupedzisira shanduro yeFX705, asi panguva imwechete iyi kuyerwa kunogona kudikanwa kuitira kuti GPU irege kushandiswa mumitambo. FX705GM neI7 CPU uye GTX 1060 mafirimu inowana kuoma kwakanyanya kunatsiridza kushanda kupfuura TUF FX505GE model yakaedzwa kare, mune chisiki duku.
Heino izvo zvatinazvo neiyuniti iyi, tichimhanya Far Cry 4, imwe yezvinyorwa zvinoremekedzwa kunze uko, pane FHD resolution uye zvakanyanya zvirongwa:
kunze kwebhokisi, Kuenzanisa fan profile, iyo CPU inogadzirisa kumativi ose 3.5 GHz / 94 C, uye GPU pa 1.62 GHz / 85 C;
pamwe chete neCUU isina kukodzera, Balanced fan profile, iyo CPU inogadzirisa kune 3.8 GHZ / 95 C uye GPU pa 1.64 GHz / 83 C;
kushandura Overboost zvishoma nezvishoma kunoderedza mapurisa eCUU / GPU ne 1-3 madigiri, pasina kuchinja kwakanyanya pakuita;
pa Silent Mode maitiro aGPU anowira kune 1.1 GHz chete, izvo zvinoguma nekushanda kukuru kwekushanda.
Basa racho rakanaka chaizvo. GPU inodonha zvishomanana pasi payo yakareba Turbo purogiramu mumitambo yekutamba, asi zvose CPU neGPU zvinomhanya pamatambo akakwirira chaizvo. Kushandura CPU kunoita kuti ikwanise kuenderera mberi paTurbo Frequencies paunenge uchitamba mitambo, asi ine zviduku zvishoma paGPU uye kubhejera kwekushanda. Kuchinja kune Overboost kunonyanya kungoguma nekuwedzera kwekunzwa (kusvika ku 56-57 dB kumusoro wepamusoro), asi kuchinja Kunze kunoita kuti laptop yacho igare yakanyarara (42 dB kumusoro kwepamusoro), asi ne hit in performance.
Zvose mune zvose, kunotonhora chinhu chinokonzera pachikwata ichi chekuedza. Kuenzanisa, iyo yakafananidzirawo ROG GL504 Scar II inobvumira GPU kuchengetedza nekukurumidzira kunenge kwakapoteredza 1.72 GHz muFarCry, pamatambo mashoma (CPU - 80, GPU - 78 C).
Itafura iri pasi inounganidza migumisiro yemitambo yeTUF FX705, pamwe chete nevaya vakanyoreswa paROG GL504 neGTX 1060 mifananidzo uye TUF FX505 neGTX 1050 Ti mifananidzo. Muenzaniso we17-inch unowanikwawo ne 1050 Ti mifananidzo, uye nhamba idzi dzichakuudza kuti maitiro aya api anofanira kutarisana nemumwe. Usatsanangurira GTX 1050 Ti mitambo kuti inomhanya yakajeka kunyange zvazvo, sezvo vachiwana kugadziriswa kwekugadzirisa.
Mumvuri Mordor 88 the 58 the 102 the
guva Raider 92 the 64 the 98 the
Rise of PAGUVA Raider 58 the 44 the 62 the
Bioshock Infinite 101 the 73 the 109 the
FarCry 4 76 the 52 the 87 the
Kunyange kana ichiita 5-10% yakashata pane kumwe kushanda mune iyi FX705, GTX 1060 GPU inoramba iri yakakurumidza kusarudza kupfuura 1050 Ti mamwe maitiro. Iwe uchazofanira kubvuma mazinga ekushongedza eCUU / GPU ayo munguva inogona kutungamirira kune nyaya dzinovimbika, ndicho chikonzero ndingakurudzira kuenda kuROG GL704 Hero II pane iwe uri shure kwekambani 17-incher neGTX 1060 mifananidzo , haisi kungoita zviri nani, ndiyo inonyanya kushandisa laptop. Asi iwe unofanirwa kubhadhara muhomwe pamusoro peTUF FX705.
Mheremhere, Heat, Kutaurirana, vatauri nevamwe
Asus akaita shanduko yakaoma yekugadzirisa muTUF FX705GM, ine mafai maviri makuru (ane guruva rinopedza mitsara) uye mitambo yakasiyana-siyana, isina kufanana nekugadziriswa kweROG GL 2018 series, asi yakaswedera pedyo. Ndicho chikonzero ndinowana yakakwirira yeCCU / GPU zvishoma zvisinganzwisisi uye ini ndinokukurudzira kuti uwedzere kutarisa maitiro ekugadzirwa kwekupedzisira kwekutengesa kuona kuti avo vanobata kupisa (uye kuti vanoita sei).
Sezvambotaurwa kare, Asus anopa zvitatu zvefaira zvaunokwanisa kushandura pakati: Kunyarara, Kuenzanisa uye Overboost. Ndinokurudzira kuchengeta kuenzanisa nguva dzose.
Nekushandiswa kwezuva nezuva, fan weCPU inoshanda nguva dzose, asi pazvisinganzwisisiki mazinga muimba yakanyarara, paunenge uchida kunzwa kutinhira kweHDD. Nemitambo, mafesheni anomhanyira kusvika neA52 dB pamusoro wepamusoro paEkanise uye anonyatsoziva pane Overboost, kune 56-57 dB, asi zvishoma zvisingabatsiri pakuita. Kushandura kuKunyarara kunoita kuti laptop yacho ive yakanyanyisa (41-42 dB), asi panguva imwechete inotora kurasikirwa kwekushanda.
Kana iri yekunze kwechando chekushanda, FX705 inoramba yakanyanyisa painenge ichimhanya mitambo, iine dzimwe nzvimbo panzvimbo yepasi, pamusoro peGPU, inosvika kumazinga akare.
* Kushandisa kwezuva nezuva - Netflix mu EDGE kwemaminitsi 30
* Kutakura - kutamba Kure Cry 4 kwemaminitsi 30
Iyo TUF FX705 yakatora inonzi Wave 2 Intel Wi-Fi module ne Bluetooth 5.0, pamwe neGigabit LAN. Kunze kwekuedzwa kwechikwata kwakaitwa zvisina kufanira pamhepo isina tsvina, uye sekufanana ne15-inch FX505 version, imwe yemapotputa anonyanya kupfuura atakamboedzwa nechekugadzirisa, kunze kwe router uye pa 30 tsoka ne 2 masvingo mukati.
Vapuriti paiyuniti iyi vakanga vakanyanyisa kudarika avo vari paFX505, kusvika kusvika ku76 dB kumusoro. Inzwi iri richiri kuburikidza nekucheka kuduku kumativi uye pane zvishoma, zvishoma pamucheto wepasi, asi pakati nepakakwirira zvakanaka. IFX705 inochengetedzawo kukwanisa kubudisa zvakapoteredza inzwi kune headphones uye kunze kwevatauriri kuburikidza ne3.5 mm jack.
Iyo kamera yakaiswa pamusoro pechinyorwa, kunyange ne-bezels maduku (zvakasiyana ne GL704s), uye inopa mapurisa akanaka mumakamuri akanaka, asi yakashambidzwa zvakanaka.
Pane bhatiri ye64 Wh paAusus TUF FX705, iyo inenge yakaenzana ye 17-inch laptop mazuva ano. Pane Optimus on-board, asiwo hardware ine simba uye ane nzara 144 Hz 17-inch screen, saka hausi kuzowana hupenyu huri hwebheteri neiyo laptop.
Hezvino izvo zvingaitarisira, nechokuvharidza chinowanikwa pa 40%, zvinenge zvikamu zve120 zvekujeka.
14.5 W (~ 4 h 25 min yekushandisa) - kugadziridza mavara kuGoogle Drive, Bato Rakanaka Bhatari, skrini pa40%, Wi-Fi ON;
12.5 W (~ 5 h yekushandiswa) - 1080p video yakazara yevhurairi pa Youtube muEdge, Better Battery Mode, skrini pa40%, Wi-Fi ON;
12 W (~ 5 h yekushandisa) - Netflix muEdge, Better Battery Mode, skrini pa40%, Wi-Fi ON;
12.5 W (~ 5 h yekushandiswa) - 4K fullscreen .mkv mavhidhiyo muIndaneti yeApp, Better Battery Mode, skrini pa40%, Wi-Fi ON;
18 W (~ 3 h 30 min yekushandisa) - kutarisa muEdge, Better Performance Mode, skrini pa40%, Wi-Fi ON;
52 W (~ 1 h 20 min yekushandisa) - kutamba pamabhatiri, High Performance Mode, skrini pa30%, Wi-Fi ON.
Iwe unofanirwa kuwana nguva yakareba kana iwe ukasarudza iyo 60 Hz yevheji yevheji kana kuti shandura kujekesa kwebhobhodhi kubva.
Izvi zvinogadziriswa neTUF FX505 inouya ne 180 Wh simba brick uye mari yakazara inotora nguva ye1 neiyo 30 maminitsi.
IAusus TUF Kutamba FX705 haisati yavapo panguva dzechikamu chino (September 2018), asi kusvika pataiziva iye zvino, inotarisirwa ku Q4 2018.
Asus inopa zvigadziriswa neGTX 1050 Ti (FX705GE) uye GTX 1060 mifananidzo (FX705GM), uye iyo yekupedzisira inofanira kutengeswa kwemazana mashoma akaderera pane zvakafananidzwa neROG GL704, iyo inotanga pa $ 1799 nokuda kwekugadzirisa screen screen 1060 / 144 Hz.
Tichadzokorora chikamu ichi kana takaziva zvakawanda.
Sezvatakagumisa munyaya yedu pamusoro pe 15-inch FX505, chikuru che 17-inch FX705 nhepfenyuro ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvigadzirwa mukirasi yacho.
Iyo yakagadzirwa uye yakavakwa zvakanaka, inotaridzika nyore zvakakwana iyo inogamuchirwa mumatambudziko akaoma / zvikoro zvechikoro, inopa RGB keyboard uye inosarudzwa 144 Hz IPS screen, inoita zvakanaka, inotonhora uye inogara yakakwana pairipo. Panguva imwecheteyo, ine zvinyorwa zvayo: iyo keyboard inoda firmer strokes kuti iite, hapana kadhi-reader kana USB-C chikwata, GTX 1060 GPU inongomhanya chete pamusoro pe 90% yezvikwaniso zvayo (mukati mechiyero chekuedza), iyo inotonhora inochengetedza CPU neGPU pamatambo akakwirira, vatauri vanongoruzhinji uye IPS skrini haina kunyatsopenya kana ruvara-yunifomu.
Zvichigovera zvinopisa zvinokonzerwa uye zvakaputirwa GPU performance, ndinonyanya kukurudzira kuenda kune imwe yezvinhu zvinotengesa FX705GE zvigadziriswa neGTX 1050 Ti mifananidzo. Izvozvi GTX 1060 zviratidzo zviri nani zviri nani mukubata mitambo yemazuva ano, asi kana mienzaniso yekupedzisira yekutengesa ichiita seyesu chekuongorora, ini pachedu ndisingatauri nekombiyuta pane kuchengetedza CPU / GPU ku85-95 C nemitambo, izvi zvinogona inotungamirira kune kuvimbika kune nyaya pasi pemugwagwa. Nokudaro, ndichazonyanya kunetseka kuti ndiongorore dzimwe mhinduro kuti ndizive chaizvo kuti mabhii eFX705GM anoita sei uye anobata kupisa.
Asus anoronga kubhadhara kukanganisa kweFX705 nematambudziko ane utsinye, kuitira kukwikwidzana nezvimwe zvinotengesa 17-inch laptops pamusika. Iyo Lenovo Legion Y730 inopikisana zvikuru iwe unofanirwa kuongorora kana iripo, nepo 17-inch Acer Predator Helios isingadhuri, asi iyo inokonzera, nebheteri duku.
Izvi zvakasara, kana bhajeti inobvumira uye iwe uri kutevera GTX 1060, iwe unofanirawo kufunga zvishandiso zvakadai seAsus ROG GL704 kana MSI Raider GE73, iyo inonyanya kushandisa laptops ine nicer builds, keyboards, screens uye thermals, asi kwete zvinonyanya kukosha-zvingakosha zvingasarudzwa zvemari yako.
Izvi zvakanaka chaizvo zvinyorwa-up review yedu yeAsus TUF FX705GM. Chikamu chinotsanangurwa chiri pasi apa chinomirira mhinduro yako, maonero nemibvunzo kunyange zvakadaro, uye isu tiri pedyo kuti tibatsire kana tikakwanisa.
Andrei Girbea, Editor-in-Chief we Ultrabookreview.com. Ndave ndichivhara makombiyuta ehurumende kubvira ku2000s uye iwe uchanyanya kuwana tsvakurudzo uye mazano akazara akanyorwa neni pano pawebsite.
ASUS TUF Dash F15 Ongororo: Anoda Mbiri uye Mutambo Wemitambo Laptop
Asus ZenBook 14 UX425 ongororo (UX425JA - ine Intel i7-1065G7 & Iris Pro)